Igwe ịgbado ọkụ na mpempe akwụkwọ tube na -enyere Malaysia Petronas onye na -ebubata ọkụ ọkụ na -ebuga ọkwa ọzọ
TP060 tube to tube mpempe akwụkwọ welded, dị ka ihe ngosipụta nke ngwa ịgbado ọkụ nke orbital n'onwe ya mepụtara ma mepụta Kunshan HUAHENG Welding Co., Ltd., bụ nke a na -ejikarị maka ịgbanye mpempe akwụkwọ tube nke ndị na -ekpo ọkụ na ndị na -agbanwe ọkụ. Ugbu a, weld a ...
Isi Orbital mechiri emechi na Tube Omuma ruo Tube mpempe akwụkwọ Weld Head na ngwa mbukota ihe onunu.
SHANDONG BIHAI PACKAGING MATERIALS CO., LTD. E hiwere ya na 1998, kpuchie mpaghara 160 acres, yana akụ nwere nde CNY nde 170, yana ihe dị ka ndị ọrụ 500. Ọ nwere mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị narị igwe 170 na -ejuputa aseptic. Akwụkwọ aluminum p ...
Ihe mejupụtara 10 na -abụghị maka Powersource nke kwesịrị ị paya ntị
Akụrụngwa ọkọlọtọ Huaheng Cutting Systems Co., Ltd., Nke a na -akpọbu Ngalaba Ncha nke HUAHENG Welding Co., Ltd., hiwere na 2014 dị ka onye enyemaka nke HUAHENG kpamkpam. Companylọ ọrụ ugbu a nwere ndị ọrụ 120, 90% n'ime ha nwere ahụmịhe karịa afọ 6 ...